K121-C3 Spybot iyo sida kumbiyuutarka loogu nadiifiyo « .::ISKUUL::. Hoyga Waxbarashada
1,137 views	Category: K121-Ammaanka iyo Difaaca Kumbiyuutarka
4 Responses to “K121-C3 Spybot iyo sida kumbiyuutarka loogu nadiifiyo”
Abdurahman nuur daahir says:	January 21, 2011 at 1:32 am	asck ?
walal wax kale oo aan idinku mahadnaqo magaranayo
waayo waad mahadsantahay waxay igu qaadanaysaa 3 daqiiqo
lakin ilahay ha idinka jasaa i siiyo
fadlan naga daalina aad ban idin xiisaynaynaa
casharada runtii waana la soconaa
Reply	Dalmar says:	May 6, 2011 at 7:36 am	Cabdiraxmaan adaa mudan, waan ogahay inay casharada mar hakad galeen, laakiin wixii hadda ka dambeeyo si joogto ayay u socon doonnaan inshaa allaah, daalna warkiisa ma jiro.
Reply	mubaarik says:	July 23, 2011 at 6:08 am	macalinka waan salaamayaa salaan kadib markaan damco inaan casharka daawado ee aan bogga soo furto ciwaankana doorto vedeo gii iima soo baxayo oo waxaan soo baxaysa calaamada X oo muujinaysa inaan sawirka iksuulka astaantuusu muuqanayn vediona iisoo baxayn maxay tahay cilladu .
maxaase xal ah
Reply	Dalmar says:	July 23, 2011 at 11:56 am	Walaal waa markii iigu horaysay oo arday iisoo gudbiyo in casharada aysan soo baxaynin!, ma kumbiyuutarka caadi ah ayaad casharada ka daawanaysaa mise Mobile? . Haddii aad Mobile ama telefoon aad ka daawanaysid waa sax in mobile-lada qaar uusan muuqaalka kuu soo baxaynin, haddii aad kumbiyuutarka guryaha ka daawanaysid waxaa dhici karta in mararka qaar uu soo daaho marka xoogaa u yara sug. Haddii cillada ay sii jirto fadlan ila soo socodsii.